Tag: seo kuongorora | Martech Zone
Tag: seo kuongorora
Takave neziso redu paSERPS.com kwechinguva ikozvino. Muvambi Scott Krager akatiratidza mavhezheni ekutanga uye takafadzwa chaizvo. Takamboshandisa chikamu chedu cheSEO maturusi ekuongorora. Nekudaro, SEO inoenderera ichichinja… uye maturusi mazhinji haasati akachengeta kumusoro. Chikwata chaScott chakagamuchira shanduko uye chaicho chakauya nehurongwa hwakanyatsosiyana… nekwaniso yekubatanidza zvakananga neGoogle Analytics, kuongorora zviratidzo zvemagariro, kuyera zviitiko zvekuyedza